Mkpụrụedemede French na mkpọpụta ya - UniProyecta
Mkpụrụedemede French na mkpọpụta ya
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmụ mkpụrụedemede na French, ọ bụ n'ezie n'ihi na onye nkuzi gị ma ọ bụ nkuzi French na -ekpebi ịkụziri ya na mbido. Ma n'ihi gịnị? Enwere ọtụtụ ezi ihe mere ị ga -eji mụta mkpụrụedemede French, dị ka ị ga -ahụ n'isiokwu a. Mana enwerekwa ọtụtụ ezi ihe kpatara ịghara ịmụ ya, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ka ị ghara ime ya ihe mbụ ị na -agbalị ịmụta n'asụsụ Napoleon.
A na -ahụta mkpụrụedemede dị ka ntọala nke asụsụ, ọtụtụ nkuzi mmụta asụsụ mba ọzọ na -amalite ụmụ akwụkwọ n'ụzọ dị otú a. N'ezie ịmụta mkpụrụedemede nwere ike inye aka, mana ọ gaghị enyere gị aka ikwurita okwu ma ọ bụ gbasaa okwu gị.
Nke a apụtaghị na ị ga -eleghara ya anya, naanị ihe ọ pụtara bụ na ị ga -enye ya mkpa ọ kwesịrị. Ọ bụ ya mere ebe a anyị ji kwere na mkpụrụedemede kwesịrị ịmalite ịmụ ihe ozugbo ị nwere ihe ọmụma bụ isi nke okwu kwa ụbọchị, njikọta, wdg.
1 Otu esi ede mkpụrụ okwu na French
2 Otu esi akpọ mkpụrụ okwu na French
3 Njirimara nke mkpụrụ okwu na French
4 Otu esi amụta mkpụrụedemede French
4.1 Mụta abụ mkpụrụedemede
4.2 Mee mkpesa
Otu esi ede mkpụrụ okwu na French
Tupu ịmalite, nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara mkpụrụedemede French: ọ bụrụ na ị bụ onye na -asụ asụsụ Spanish, ị gaghị enwe nsogbu, mgbe ahụ French na Spanish na -ekerịta otu mkpụrụedemede na ọbụna asụsụ Spanish gụnyere ñ nke ndị agbata obi anyị enweghị. Naanị ihe na -agbanwe bụ ọdịiche nke mkpụrụedemede ndị ahụ na ịkpọpụta ha.
Nke mbu, dị ka n'ọtụtụ asụsụ ndị ọdịda anyanwụ, mkpụrụedemede French ọ bụla nwere ike ịbụ nnukwu ma ọ bụ obere mkpụrụedemede.
N'ezie, ọtụtụ mkpụrụedemede French nwekwara ụdịdị - ụdaolu ma ọ bụ akara ndị ọzọ agbakwunyere na (na -emekarị) na -emetụta ịkpọpụta ha. Agụnyeghị ndị a na mkpụrụedemede French, mana ọ dị mkpa ka amara ha, yabụ anyị etinyela ha na listi ị ga -ahụ n'okpuru.
Enwere otu ihe ị ga -eburu n'uche: anyị etinyela mkpụrụedemede obere okwu, n'ihi na ọ bụ otu a ka esi ejikarị ha eme ihe. N'ihu, ọ bụ ihe ziri ezi ka iji ụdaolu na mkpụrụedemede dị obere na nnukwu mkpụrụedemede; agbanyeghị, na French ụbọchị niile, ọtụtụ ndị mmadụ na -ahapụ ụdaolu na mkpụrụedemede ukwu. Tupu ịhụ ka esi akpọpụta mkpụrụedemede dị iche iche n'asụsụ French, onyonyo ya na ihe atụ maka mkpụrụedemede ọ bụla na ịkpọpụta ya:
Ma ugbu a, n'atụghị egwu ...
Otu esi akpọ mkpụrụ okwu na French
Ugbu a, anyị ga -ahụ ka esi akpọpụta mkpụrụedemede ọ bụla mebere mkpụrụedemede French na omimi, yana ụdị dị iche iche ọ nwere ike inwe.
à - Enwere ike ịchọta ya n'okwu dịka ebe a, ebe ọ na -egosi nke ahụ a na -emesi ụda nke akwụkwọ ozi ike.
â - Achọtara n'etiti ọtụtụ okwu French, gụnyere nnukwu ụlọ. Ọ bụ ezie na ụda okwu anaghị agbanwe agbanwe oge niile, akwụkwọ ozi a na ngwakọta ụda olu bụ akara ngosi gara aga.
Dị ka ọ dị n'asụsụ Bekee, ụda nke c ọ nwere ike ịdị iche dabere na leta na -esote. Ọ bụrụ na a na -eso ya a e, ima ọ bụ y, ọ ga -adị ka ụda dị nro, dị ka ọ dị n'okwu ahụ elu igwe. Ọ bụrụ h na -eso ya, dịka na okwu nkata, ọ ga -eme ụda yiri sh.
ç - Cedilla a ma ama bụ ụzọ nke c were ụda dị nro n'agbanyeghị mkpụrụedemede na -esote ya - dịka ọ dị n'okwu Français.
é - Nwere ike igosipụta otu mkpọpụta okwu, ma ọ bụ ihe nnọchianya gara aga ma ọ bụ ụdị ngwaa. Dị ka ọmụmaatụ, n'oge okpomọkụ.
è - Na -egosi otu mkpọpụta okwu, dịka na okwu ahụ ude.
ë - Ọ pụtara na a ga -akpọrịrị mkpụrụedemede a ewezuga ndị gbara ya gburugburu, dịka na okwu ahụ Christmas.
Ụda mere site g ọ nwere ike ịdị iche dabere na leta na -esote. Ọ bụrụ na a na -eso ya a e, i o y, ga -ada ụda dị ka a dị nro g, dị ka okwu oroma, n'adịghị ka a g ike, dị ka okwu nwa nwoke.
A bịa n'ịkpọ okwu, h nwere ike ịbụ hardest mkpụrụedemede na French. Enwere ụdị "h" na French: h na -achọ na h ogbi.
Dịka iwu isi mkpịsị aka, ọ bụrụ na okwu malitere na h sitere na Latin, h na -agbachi nkịtị. Dịka ọmụmaatụ, horloges ha a na -akpọ ya "lezorloges."
Dịka iwu n'ozuzu, ọ bụrụ na okwu bidoro na h sitere n'asụsụ na -abụghị Latin, a na -achọ h. Ọmụmaatụ: nye ya.
N'ezie, ọ dịghị mfe ịmata ebe okwu ọ bụla si malite, e nwekwara ihe ndị ọzọ. Nanị ihe ngwọta nke m chọtara n'onwe m bụ naanị iji h na -eburu okwu ndị a n'isi, na ugbu a ugbu a, m na -emehie mgbe ụfọdụ ma ọ bụ nwee obi abụọ, dị ka ndị obodo French n'onwe ha na -enwe site n'oge ruo n'oge, yabụ na ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị, n'ihi na mkpụrụedemede French dị mgbagwoju anya maka onye ọ bụla 🙂
ï - A ga -akpọrịrị ya iche na mkpụrụedemede gbara ya gburugburu.
î - A naghị eji ya eme ihe taa belụsọ na ngwaa ụfọdụ, dịka -amụ.
ô - Nwere ike igosi mgbanwe mkpọpụta okwu.
Dị ka ọ dị na Bekee, nke a na -esochikwa ya mgbe niile.
Na French, s na -enwekarị ụda dị nro (nwanne ...), belụsọ na ọ nọ n'etiti okwu sochiri ụdaume - mgbe ahụ a na -akpọ ya dịka z, dịka n'ime arụ ọrụ. A na -ejikwa ụda z maka njikọ dị n'etiti s na okwu na -amalite site na ụdaume (ma ọ bụ mgbe ụfọdụ akwụkwọ ozi na -agbachi nkịtị) - dịka ọmụmaatụ, ihe ndị a.
ù - A na -eji ya iche okwu ou y ebe.
- Ọ pụtara na ekwesịrị ịkpọpụta leta a iche na ndị gbara ya gburugburu.
Dịka n'asụsụ Bekee, a na -emeso y dị ka ụdaume na ọkwa mkpọpụta okwu.
- Ọtụtụ oge, a na -eji akwụkwọ ozi a aha obodo ochie ma ọ bụ obodo French.
Njirimara nke mkpụrụ okwu na French
Obi (obi) bụ otu n'ime ọtụtụ okwu French edere na mkpụrụedemede na -adịghị na Spanish. Dị ka ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ, French na -ekwekarị ka ede mkpụrụ okwu mba ọzọ na aka aka mbụ ha, nke pụtara na etinyere ụdaume ma ọ bụ mkpụrụedemede na -adịghị na mkpụrụedemede French.
Na mgbakwunye, enwerekwa ligatures abụọ o liaisons na ị nwere ike ịhụ na okwu French. Ndị otu mkpụrụedemede ndị a na -edepụta mkpụrụedemede na ụda olu na -egosi otu mkpọpụta okwu. N'ebe a, anyị na -akwado vidiyo ka ị mụta mkpụrụedemede French nke ọma:
Ihe njikọ French abụọ a na -ahụkarị bụ:
æ, ngwakọta nke mkpụrụedemede a na e. A na -eji ya n'okwu ụfọdụ ewepụtara na Latin ozugbo, dịka Akwụkwọ eji achọ ọrụ.
œ, ngwakọta nke mkpụrụedemede o na e. Ikekwe ị hụla ha n'okwu nkịtị dịka nwanne na obi.
Ọ dabara nke ọma, ọ bụrụ na keyboard gị anaghị ekwe ka abanye akara ndị a, French ga -aghọta okwu ahụ ma ọ bụrụ na ị pịnye mkpụrụedemede abụọ ahụ iche iche. N'ezie, ọ bụrụ na ị na -ede akwụkwọ, gọọmentị ma ọ bụ akwụkwọ agụmakwụkwọ, ekwesịrị iji ligature. Ọ kachasị mma n'okwu ndị a bụ naanị idetuo na mado leta ahụ.
V na mkpụrụedemede kacha eji eme ihe na French bụ e, a, i, s na n. Akwụkwọ ozi kacha nta na -ejikarị bụ x, j, k, w, na z. Ozi a nwere ike ọ gaghị adị ka ọ bara ezigbo uru, mana ọ na -enyere aka ịma ebe ị ga -eduzi mmụta gị.
Otu esi amụta mkpụrụedemede French
Ọ bụrụ n'ikpebie ihu mkpụrụedemede French, anyị akwadebela ọtụtụ ndụmọdụ iji mee ka ọ dịrị gị mfe ịmụta ihe. Lee ụfọdụ aro:
Mụta abụ mkpụrụedemede
Ị nwere ike mara egwu a n'asụsụ ala gị, ma ọ bụ n'asụsụ ndị ọzọ ị mụrụ. Ọ dị mma, ọ dịkwa na French otu egwu na -adọrọ adọrọ. Ị nwere ike ịchọta ụdị mkpụrụedemede French dị iche iche site na ịchọ ịntanetị. Ọ bụ ezigbo echiche, ọkachasị maka ụmụaka ịmụta mkpụrụedemede French.
Nke a bụ ọkacha mmasị m, na nke ụmụ akwụkwọ m ji mụta mkpụrụedemede French. Naanị ọghọm ya bụ na ihe a na -abụ na njedebe abụghị amaokwu ọdịnala, kama ọ bụ ihe metụtara aha ndị na -eme ihe nkiri.
N'agbanyeghị nke ahụ, a na-agụ ya nke ọma ma na-akpọ ya nke ọma, n'adịghị ka ụfọdụ nsụgharị, nke na-adị oke ọsọ ma ọ bụ jiri onye na-abụ abụ na-abụghị nwa afọ. Ị nwere ike lelee ihe dị n'okpuru vidiyo a ka ị hụ ma enwere nsogbu mkpọpụta okwu. Ozugbo ịchọtara ụdị nke masịrị gị, nwaa ịkwọ ya ọtụtụ ugboro n'ụbọchị.
Iwu na -ewu ewu na ụlọ akwụkwọ French maka ihe kpatara ya, na nke ahụ bụ na ha na -aba uru maka mmụta na iburu ide okwu nkịtị.
Nke a abụrụla nke a, anyị nwere olile anya na ị masịrị usoro mmụta anyị iji mụta ka esi akpọpụta na dee mkpụrụedemede n'asụsụ French. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike hapụ anyị okwu anyị ga -anwa ịza ya ozugbo enwere ike.
Inicio » Asụsụ » Frances » Mkpụrụedemede French na mkpọpụta ya
Ụdaume na Bekee: Ụda ụda na mkpọpụta okwu